‘मेरो पति खै ?’ भन्दा अग्नि सापकोटा भागे’3Ghumti
अन्तर्वार्ता | 2020-01-27 15:34:00 |
तपाईको पति कहिलेदेखि माओवादीले अपहरण गरी हत्या गरेका हुन् ?
२०६२ साल वैशाख १६ गते माओवादी कार्यकर्ताहरूले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकबाटै मेरो पति अर्जुनबहादुर लामालाई अपहरण गरी लगेका हुन् । व्यवस्थापन समितिको बैठकमा चुनावको कुरा भइरहेको रहेछ । मेरो पति काठमाडौंमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई यादव भन्ने व्यक्तिले फोन गरेर बोलाएछ ।
ऊ पनि काठमाडौं गएर मेरो पतिकै मोटरसाइकलमा चढेर यहाँ काभ्रे दाप्चा आएको हो । मेरो पतिलाई अध्यक्ष बनाउने भनेर नारायण पौडेल भन्नेले फकाएर ल्याएछ । भोलिपल्ट चुनाव थियो । बिहान १० बजेतिर चुनावका लागि खाना खाएर निस्कनुभयो । निर्विरोध भइसक्नुभएको थियो । त्यो बेला माओवादी कार्यकर्ताहरू श्याम गौतम, भोला अर्याल र यादव पौडेल आएर अपहरण गरेर लगे । हामीले लगेको त देखेनौं, पारि पु¥याएपछि हामीलाई थाहा भयो ।
तल बेंसीभन्दा माथि पुगेपछि बाटोमा गएर पनि फर्केर आएछन् । म पनि गएँ । तर बाटोबाट फर्केर आएकाहरूले मलाई बाटोमा भेटे । पानी परिरहेको थियो । उनीहरूले जानु पर्दैन, केही पनि हुँदैन भनेर मलाई आश्वासन दिए । फलाम साँघुमा पुगेपछि मेरो पतिलाई लिएर जानेहरूलाई अगाडि जान दिएनछन् । अर्को समूहले त्यहाँबाट लिएर गएछन् ।
तपाईहरूले त्यसपछि भेट्नुभएन ?
हामीले धेरै कोसिस गर्दा पनि भेट भएन । खबर भने पठाउनुभएको थियो । अपहरण गरेका मध्ये सुबु भन्ने महिलाले केही पनि हुँदैन भन्थिन् । दुई–दुई जनाको हत्या गरेकालाई त मार्दैन भने दाई (अर्जुन) ले त के गर्नुभएको छ र ? भन्थिन् । त्यसरी मलाई ढाँटे । मसहित मेरो परिवारका अरू पनि भेट्न जाँदा भेटन पाएनौं ।
रोएर फर्कियौं । उनीहरूले घरमै पु¥याउन आउँछौं भनेका थिए । माओवादीका कार्यकर्ता बूढाबूढी रहेछन् । उनीहरूले भनेको भएन । पछि १५ दिनपछि यादव पौडेल भन्नेलाई भेट्यौं । उसले दाइलाई केही भएको छैन, केही हुँदैन भन्यो । त्यसपछि हामीलाई यहाँको एकजना भाइले काठमाडौं लिएर जानुभयो ।
आईसीआरसी, मानवअधिकार आयोग आदिमा उजुरी दियौं । उनीहरूले पनि खोज्छौं भने । तर ढाँटे । खोजेनन् । खाजेर तपाईंकै घरमा लिएर आउँछौं भनेका थिए । पछिदेखि माओवादीहरूले उनीहरूको पार्टीबाट कल आउन थाल्यो । पैसा ठग्दै लैजाँदै गर्न थाले । उनीहरूले मबाट ६ जोर कपडा लिएर गए । जुत्ता मोजासमेत लिएर गए ।
यसरी पैसा, कपडा लैजानेहरू तिनै अपहरणकारी थिए ?
उनीहरूले अरूअरू मान्छेलाई खटाएर पैसा माग्न पठाउँथे । मेरो श्रीमान्लाई लगेपछि अपहरणकारीचाहिँ आएनन् ।
कति पैसा पठाउनुभयो ?
चितवनतिरको मान्छे, डाँडापारिको मान्छे, दाप्चा हटियातिरका गरी ५ जना जतिले जम्माजम्मी ६ लाख जति पैसा लगे । त्यो बेला मेरो तीन तोला सुन बेच्यौं । बच्चाहरूको पनि सुन बेच्यौं । ऋण गरेको डेढ लाख जति लगे । त्यो मैले कसोकसो
गरेर तिरेँ ।
उहाँलाई हत्या गरेको कहिले थाहा पाउनुभयो ?
वैशाखमा अपहरण गरेर लगे । साउने सक्रान्तिमा ल्याउँछौं, सक्रान्ति राम्रोसँग मान्न पाउनुहुन्छ भनेका थिए । तर पाएनौं । पीर नमान्नु भन्थे । पछि ल्याउँदै ल्याएनन् । माघतिर होला, जिल्लामा पत्रिकामा उहाँको भिडन्तमा परेर मारिएको
खबर छापिएछ ।
तपाईंलाई त्यसपछि थाहा भयो ?
पत्रिकामा त छापेछन् । तर हामीले पत्रिकाको कुरा पत्याएनौं । हामीले पैसा दिएको दियै, गरिराख्यौं । दुई वर्षसम्म त पैसा
दिइराख्यौं । मेरो पतिको सुन र घडी माओवादीले लगाएर हिँडेछन् ।
के कारणले अपहरण भयो ?
एमालेमा हुनुहुन्थ्यो । त्यसअघि राप्रपामा हुनुहुन्थ्यो । एमालेमा हुँदा केही समस्या थिएन । पार्टीगत कुरा थिएन । काठमाडौंमा बालुवाटारमा निक्षेशमशेर भन्ने राजाको सालोसँग मिलेर घर बनाएको कुरा माओवादीलाई थाहा भएछ । राजाको सालाको साथी भन्ने आरोप थियो ।
कहिलेसम्म पति फर्केर आउने आशा थियो ?
दुई वर्षसम्म आशा थियो । पत्रिकामा लेखेको कुरा पत्यार लागेन । मारेको भन्ने थाहा भएन । डेढ वर्षसम्मचाहिँ मारेको कुरा थाहा भएन ।
भिडन्त हो कि माओवादीले मारेको हो ?
भिडन्तमा परेको होइन । भिडन्तको बेला त बुडाखानीमा लुकाएर राखेको थियो । भिडन्तपछि मारेको हो । भिडन्तपछि मेरो पतिले चिठी पठाउनुभएको थियो । म काठमाडौं थिएँ, घरमा चिठी आएको थियो ।
उहाँको निधन भएको खबर कसरी थाहा भयो ?
हामीले लास नै देखेनौं । यस्तै विभिन्न मान्छे, पत्रिकाबाट मात्रै थाहा पाएको हो । त्यसपछि केही पनि थाहा छैन ।
कहा“, कसरी, किन उहाँको हत्या गरेछन् माओवादीले ?
उनीहरूले सल्लाह गरेर नै हत्या गरेका रहेछन् । भोलिजस्तोमा मार्नुपर्नेमा अघिल्लो दिन कुखुराको मासु पकाएर दिएछन् । उहाँले मासु भात खानु भएनछ । रुनुभएछ । दिउँसो लगे राखेछन् । मार्नुअघि नै खाल्डो खनेका रहेछन् । राति खाल्डो नजिकै लगेछन् ।
अनि शरीर काट्दै मासु झिक्दै खाल्डोमा हाल्न थालेछन् । त्यसरी बर्बरतापूर्वक हत्या गरेछन् । सास नगई नै खाल्डोलाई हालेर पुरेछन् । यो कुरा मैले डेढ वर्षपछि थाहा पाएकी हुँ । पछि अनि मलाई मेरो पतिलाई मारेकै रहेछन् भन्ने थाहा भयो ।
पछि कहिले विश्वास भयो ?
पछि विश्वास भयो । अनि मैले पैसा पनि दिन छाडें । मेरो ससुरालाई रक्तचापको रोग थियो । ६४ सालमा बुबा पनि बित्नुभयो । छोराकै पिरले बित्नुभयो । बेहोस बेहोस भएर बित्नुभयो । माओवादीले पतिलाई मारे, ससुरा छोराको पीरले मर्नुभयो । मेरो छोरालाई पनि लैजान खोजेका थिए । तर मैले दिइनँ । त्यसपछि ६४ सालमा उजुरी दर्ता गर्ने सोचेँ ।
तपाईंले अर्जुनबहादुर लामाको अपहरण गर्नेहरूविरुद्ध जाहेरी दिनुभएन ?
जाहेर दिन गयौं । तर कसैले पनि जाहेरी लिन मानेन । प्रहरीले पनि लिएन । सिडियोले पनि लिएन । स्थानीय प्रहरीको त कुरै भएन । कसैले पनि हामीलाई सहयोग गरेनन् । त्यसपछि अदालतमा गएर गुहार माग्यौं । अनि अदालतको आदेशबाट हाम्रो जाहेरी दर्ता भएको छ ।
त्यसपछि माओवादीहरूसँग भेट भयो कि भएन ?
एकपटक लालध्वज भन्नेसँग भेट भएको थियो । तर त्यो भाग्यो । उनीहरूको पार्टी कार्यालय कुपण्डोल जाँदा त्यो भाग्यो । सापकोटा भन्नेलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा भेटेँ ।
के भन्नुभयो अग्नि सापकोटालाई भेटेर ?
मैले चिनेकी थिइनँ । अरूले चिनायो । अनि म ढोकामा बसेर कुरें । आएपछि मैले सापकोटा भनेको तपाईं हो ? भनेर सोधेँ । उसले हो हो, मैले के गर्नुप¥यो ? भनेर सोध्यो । मेरो श्रीमान खै ? भनेर सोधें ? कहाँ लगेर मा¥यौं ? भनेर सोधें । ऊ भाग्यो । गार्डहरूले छेकेर लगे । अनि कुरा हुन पाएन ।
तपाँईहरूले राहत कति पाउनुभयो ?
दुई लाख, तीन लाख गरेर दियो, दिएको जति सकियो । १० लाख जति दिए ।
साभारः अमृतबजार साप्ताहिकबाट ।